Abuu Muscab iyo Saraakiil Sare oo Katirsan Ururka Al Shabaab oo la dilay & Abuu Cubayda Gacanta lagu Dhigay - Hablaha Media Network
HMN:- Howlgal ay isla fuliyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska Soomaaliya ee Danab iyo ciidamo Maraykan ah ayaa la sheegay in lagu dilay Abuu Muscab, kana dhacay degmeda Saakow ee Gobolka JubaddaDhexe.
Warar aan Weli la Shaacin oo ay tabisay wakaalada wararka ee xinhua ayaa Sheegaya in Afhayeenkii Al Shabaab iyo saraakiil kale oo Sarsare lagu dily howlgalka.
Hawlgaladani ayaa dhacay maalmo kala duwan, laga soo bilaabo 10aug ilaa 13 aug ee bishan aynu ku jirno.
Sarkaal ku dhow xukuumadda ayaa u sheegay wakaalada wararka xinhua in howlgaladaasi ay dhaceen 10-kii bishaan August waxaana lagu bartilmaamaysaday 13-dagaalyahan oo ka tirsan Al-shabab oo markaasi ku sugnaa degmada Sakow.
Sarkaalkan ayaa sheegay in loo maleenayo in howlgalka lagu dilay hogaamiyaha Xarakada Al-shabab ee Abu Cubeyda, sarkaalka ayaa tilmaamay in sidoo kale ay jiri karto in howlgalka lagu qabtay Abuu Cubeyda, laakiin waxa uu xaqiijiyay in Abuu muscab iyo Rag kale oo Sarsare lagu dilay Howlgalkaasi.
SOURCE: Halkan ka Aqriso Isagoo Ingariis ah